တကယျပဲ ဝေးသှားကွပါပွီ – Shinyoon
ကိုယျ့ဘကျက အတငျးလိုကျဆကျခဲ့ရတဲ့ ကွိုးလေး နောကျဆုံးတော့ ပွတျတောကျသှားခဲ့ပွီလို့ပဲ ပွောရတော့မှာပေါ့ ။
ဇာတျလမျးလေးတဈပုဒျဖွဈမယျဆိုရငျ The End ဆိုတဲ့စာတနျးလေး ထိုးသှားပွီးတဲ့အထိ သခြောသှားခဲ့ပွီလေ …
ဘာရလိုကျသလဲတဲ့ … နာကငျြမှုတှေ ပွီးတော့ တနျဖိုးထားမခံရခွငျးတှေ မခဈြခွငျးတှသော ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရခဲ့တဲ့ လူသားမှာ အဆငျပွပေါတယျဆိုပွီးတောငျ လိမျညာပွီး မပွောနိုငျတဲ့အထိ ပွိုလဲခဲ့ရပွီလေ …
ဝေးသှားကွပါပွီ … သူကတော့ သာမနျနထေိုငျမှုအတိုငျးလေးပဲ အဆငျပွနေတောထကျပိုနသေလို ပိုပွီးတော့တောငျ ပြျောနသေလိုပါပဲ ကိုယျ့ လှောငျအိမျလေးထဲက ပွေးထှကျသှားတဲ့ ငှကျလေးလို လှတျလပျပေါ့ပါးလို့ ကိုယျ့မှာသာ သူပေးခဲ့သမြှ ဒဏျရာတှကေို ဖကျတှယျထားရငျး အကဉျြးကနြခေဲ့တာ ။
ဘယျတော့မှမခှဲဘူးနျော ဆိုတဲ့ စကားတှကေို ပွနျကွားယောငျတယျ ဘယျလိုစိတျနဲ့မြား လိမျညာခဲ့တာလဲလို့ …. ဘယျတော့မှ မနာကငျြရဘူးဆိုတဲ့ စကားကတော့ မဝေးခငျကတညျးက ပကျြပွယျခဲ့ပွီးသားပဲလေ ထညျ့ပွီးတော့ ပွောမနတေော့ပါဘူး …
ကိုယျ့ဘကျက ဘယျလောကျပဲ ဆှဲထားဆှဲထားပါ မမွဲခငျြတဲ့ လကျတှမှောတော့ မမွဲရမယျ့ အကွောငျးပွခကျြတှေ အမြားကွီး ရှိနခေဲ့တာပါပဲ … ကိုယျဘယျလောကျနာကငျြနလေဲဆိုတာ သူ မစာနာမိသလို သူသိခဲ့တာဆိုလို့ ဒီလကျက ဘယျလို ပွေးထှကျရမလဲဆိုတာပဲ သိခဲ့တာပါ …
အစမှာ မြှျောလငျ့ခဲ့သလို ပြျောရှငျစှာဇာတျသိမျးကွလသေတညျးဆိုတဲ့ အဆုံးသတျလေးနဲ့လဲ ဝေးပါပွီ နှဈယောကျအတူဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြလေးတှဟောလဲ ကိုယျတဈယောကျတညျး လြှောကျဖို့ပဲ ရငျနာနာနဲ့ တှေးရတော့မှာပေါ့ …
တကယျပဲ ဝေးသှားကွပါပွီ ။
ကိုယ့်ဘက်က အတင်းလိုက်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ ကြိုးလေး နောက်ဆုံးတော့ ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပေါ့ ။
ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် The End ဆိုတဲ့စာတန်းလေး ထိုးသွားပြီးတဲ့အထိ သေချာသွားခဲ့ပြီလေ …
ဘာရလိုက်သလဲတဲ့ … နာကျင်မှုတွေ ပြီးတော့ တန်ဖိုးထားမခံရခြင်းတွေ မချစ်ခြင်းတွေသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ လူသားမှာ အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးတောင် လိမ်ညာပြီး မပြောနိုင်တဲ့အထိ ပြိုလဲခဲ့ရပြီလေ …
ဝေးသွားကြပါပြီ … သူကတော့ သာမန်နေထိုင်မှုအတိုင်းလေးပဲ အဆင်ပြေနေတာထက်ပိုနေသလို ပိုပြီးတော့တောင် ပျော်နေသလိုပါပဲ ကိုယ့် လှောင်အိမ်လေးထဲက ပြေးထွက်သွားတဲ့ ငှက်လေးလို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးလို့ ကိုယ့်မှာသာ သူပေးခဲ့သမျှ ဒဏ်ရာတွေကို ဖက်တွယ်ထားရင်း အကျဉ်းကျနေခဲ့တာ ။
ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးနော် ဆိုတဲ့ စကားတွေကို ပြန်ကြားယောင်တယ် ဘယ်လိုစိတ်နဲ့များ လိမ်ညာခဲ့တာလဲလို့ …. ဘယ်တော့မှ မနာကျင်ရဘူးဆိုတဲ့ စကားကတော့ မဝေးခင်ကတည်းက ပျက်ပြယ်ခဲ့ပြီးသားပဲလေ ထည့်ပြီးတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး …
ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ ဆွဲထားဆွဲထားပါ မမြဲချင်တဲ့ လက်တွေမှာတော့ မမြဲရမယ့် အကြောင်းပြချက်တွေ အများကြီး ရှိနေခဲ့တာပါပဲ … ကိုယ်ဘယ်လောက်နာကျင်နေလဲဆိုတာ သူ မစာနာမိသလို သူသိခဲ့တာဆိုလို့ ဒီလက်က ဘယ်လို ပြေးထွက်ရမလဲဆိုတာပဲ သိခဲ့တာပါ …
အစမှာ မျှော်လင့်ခဲ့သလို ပျော်ရွှင်စွာဇာတ်သိမ်းကြလေသတည်းဆိုတဲ့ အဆုံးသတ်လေးနဲ့လဲ ဝေးပါပြီ နှစ်ယောက်အတူဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေဟာလဲ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း လျှောက်ဖို့ပဲ ရင်နာနာနဲ့ တွေးရတော့မှာပေါ့ …
တကယ်ပဲ ဝေးသွားကြပါပြီ ။